श्रीमानलाई थाहा पनि हुँदैन महिलाको यी गोप्य कुराहरु « गोर्खाली खबर डटकम
काठमाडौँ । पुरुषका बारेमा महिलाई प्रायः सबैकुरा थाहा हुन्छ। मानव सृष्टिको रचनाकार नै महिला भएकाले पुरुषको बारेमा थाहा नहुँने त कुरै भएन। तर महिलाका बारेमा कतिपय यस्ता कुरा हुन्छन् जुन पुरुषले कहिल्यै पनि थाहा पाउन सक्दैनन् ।
के हुन् त त्यस्ता कुरा ? जुन महिलाले लुकाएर राखेका हुन्छन् र पुरुषले थाहा पाउन सक्दैनन् ।रोमान्सः केटाहरु रोमान्स मन पराउने खालका हुन्छन् यो कुरा सबैलाई थाहा छ । तर पुरुषको तुलनामा महिला अझ धेरै रोमान्स मन पराउँछनन् जुन महिलाले सधैँ लुकाएर राखेका हुन्छन् र यो कुरा पुरुषले थाहा पाउँदैनन्।
पैसा बचाउँनः महिलाहरुले धेरै सामान खरिद गरेको र खर्चालु भएको कुरा बारम्बार सुनिएको छ । तर पैसा बचाउन पुरुष भन्दा महिला निकै अगाडि हुन्छन् । महिलाहरु आफ्नो पैसा बचत गर्छन र श्रीमान वा केटा साथीको पैसामा सामान किन्छन् भन्ने चाहिँ कमैले थाहा पाउँछन् ।
राति घुम्नः पुरुषको तुलनामा महिला राति घुम्न धेरै नै मन पराउँछन् । तर यो कुरा उनीहरुले लुकाएर राखेका हुन्छन् र समय आएपछि राति घुमघाम गर्छन् ।झगडा गर्नः पुरुषहरु झगडा गर्न अगाडि हुन्छन् भन्ने बुझाई छ तर यसमा पनि महिला अगाडि हुन्छन् । झडालु स्वभाव नदेखाएपनि महिलाहरु झगडा गर्ने समयमा कालीको रुप धारण गरी भयंकर रुपमा झगडा गर्न सक्छन्।
बिहे अगाडिको कुराः महिलाले आफ्नो श्रीमानसँग बिहे अगाडिको कुरा कहिल्यै बताउँदैनन् । उनीहरुसँग बिहे अगाडिको केटा साथी र तिनीहरुसँगको सम्बन्धका बारेमा सोधियो भने कुनै कुरा बताउँदैनन् तर श्रीमानको बारेमा निकै खोजीनिधि गर्छन्।
बिहे अगाडिको सम्बन्धका बारेमा श्रीमानले कुनै कुरा पनि थाहा पाउँदैनन्। यदि श्रीमानले कुनै कुरा गरेर चित्त दुखाएको खण्डमा उनले आफ्नो पूर्व प्रेमीसँग तुलना गर्नेछिन् । यो कुरा पनि श्रीमानसँग भन्दिनन् र पुरुषले कहिल्यै थाहा पाउँदैनन्।
श्रीमतीले सधैँ आफ्नो श्रीमानको जज् गरिरहेकी हुन्छिन् । आफ्नो श्रीमान सबै कुरामा पर्फेक्ट भएको मन पराउँछिन्। श्रीमानमाथि हुनसक्ने शंकालाई निकै नै ध्यान दिने गर्दछन् । यो कुरामा श्रीमान सधैँ अनभिज्ञ नै हुन्छन्।
अन्य समाचार दशा आफुलाइ जतिसुकै सबारे पनि, आफ्नो नामको अगाडी-पछाडी जतिसुकै बिशेषणहरु जोडेपनि, जस्तोसुकै सुविधा संग जिवन बिताए पनि, जिवनमा जतिसुकै उपलब्धि गरेपनि, हामीलाइ एउटा धृणित सत्यको दुर्गन्धले सधै पछ्छाई राख्ने छ; त्यो हो
हामी संसारको कंगालतम् देशहरु मध्यको एक देशका नागरीक हौ। हामी कसरी कंगाल भयौ? हाम्रो कंगालपनको कारण के हुन सक्ला? के हामी भोतिक रुपमा मात्र गरिब छौ? यी प्रश्नहरु आज हाम्रो समाजले आत्म समालोचना गर्नको लागी सोध्नु पर्ने भएकोछ।
प्राकृतिक सम्पदाको दृष्टिले हेर्ने हो भने हाम्रा पुर्बजहरूले हामीलाई सम्हाल्न सक्ने भन्दा बढी सम्पती दिएर गएका छन्। हाम्रो तराइले हामी सबैलाई प्रसस्त खुवाएरबङगलादेशमा निर्यात गर्न सक्ने खाद्य पदार्थ उत्पादन गर्न सक्छ, तर हामी खेतिको ज्ञानबाट बंचित छौ र गरीब छौ।
हाम्रा पहाडका नदीनालाहरु, सारा देशलाई उज्यालो पारेर, सबलाई खाना पकाई खुबाएर, घरघरमा यातायात पुगाएर, हरेक घरमा आधुनिक मशिनहरु चलाइ दिएर, भारतबाट बिदेशी मन्द्रा आर्जन गर्न सक्ने क्षमताबान छन; तर हामीसंग बिजुलि निकाल्ने बिध्या छैन;
हामी त्यसैले गरीब छौ। हाम्रा हिमालहरुले हामीलाई प्रसस्त बिदेशी मुन्द्रा दिन सक्छन; तर हामीलाई पर्यटन ब्यबसायको ज्ञान छैन, बिदेशीमुन्द्रा तान्नसक्ने कला छैन; हामी त्यसैले गरिब छौ।सधै भुइचालो गैरहने, र समुन्द्री तुफानहरुले सताइ राख्ने भुमिलाई जापनिजहरु ले, एक उदाहरणीय देशको रुपमा चिनाए। हामी जहिले पनि देशको भुपरिबेष्ठितालाई दोष दिदै उम्कन खोज्छौ।
पुर्व अधिकारजकुमार धिरेन्द्रकी छोरीको प्रेमीसँग रो’मान्स
उच्च रक्तचाप र युरिक एसिड भएका व्यक्तिले नखानुहोस् यी खाना, नत्र पर्नेछ पछुतो